DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo jawaab kulul siiyey madaxweynaha Soomaaliya. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo jawaab kulul siiyey madaxweynaha Soomaaliya.
Seteembar 3, 2016 11:32 b 0
Madaxweynha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmihii ugu dambeeyey safaro shaqo ugu maqnaa waddamada Itoobiya, Turkiga iyo Jabuuti ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Soo dhoweyn ka dib Madaxweynaha iyo Madaxdii kale ee Garoonka kusoo dhoweysey ayaa waxa ay si toos ah ugu gudbeen isla markaana soo kormeereen suuqqa xero dayax, xarunta dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo cusbitalka guud ee magaalada Gaalkacyo oo uu dhowaan ka dhacay qarax is miidaamin ah oo kooxda sharwadayaasha al-shabaab ay la beegsadeen dad shacab ah oo ku ganacsanayey suuqaasi.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu soo booqday Cusbitalka GMC, halkaas oo lagu dabiibayo dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa xero dayax isla markaana Madaxweynuhu waxa uu mid mid u waraystay dadkii wax-yeelladu kasoo gaadhey weerarkaasi bahalnimo.
Dhinacakale Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa markii uu soo gaadhey hoyga uu ka deggan yahay magaalada Gaalkacyo waxa uu ka war-bixiyey safaradiisii shaqo ee uu ugu maqnaa waddamada Itoobiyada, Turkiga iyo Jabuuti isagoona sheegay in safarradaasi ay ahaayeen kuwo guul kusoo dhammaaday.
Ugu dambayn Madaxweyna dawladda Puntland ayaa ka jawaabey hadal kasoo yeeray Madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya oo uu ku tilmaamayey in ay Puntland ka kooban tahay labo gobol iyo bar, hadalkaas ayuu Madaxweynaha dawladda Puntland ku tilmaamay mid aanu ka fiirsan Madaxweyne Xasan isla markaana uu muujinayo aqoon darrada ka haysata Madaxweynaha dawladda Federaalka guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaana Puntland.
“Hadalka Madaxweyne Xasan Sheekh uu idaacadaha ka yiri ee ah Puntland waa labo gobol iyo bar waxa uu muujinayaa aqoon yarida ka haysata dalka, Puntland hadalka Xasan Sheekh ku yaraan mayso kuna weynaan mayso, waxaana lagu aas-aasay Puntland shan gobol iyo degmada Buuhoodle, maantana Puntland waa sagaal gobol”. ayuu yiri Madaxweyne Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.